ShipFlow သုံးPOINTလေး ခရက်
Thread: ShipFlow သုံးPOINTလေး ခရက်
Rep Power 10 ShipFlow သုံးPOINTလေး ခရက်
shipflow ဟာ တော်တော်ရှာရခက်တဲ့ ဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ဆီမှာတောာ့ 3.4 တင်ရန်ဖိုင်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ တင်ပေး၇န် မလွယ်ကူသည့်အတွက်
ခရက်ကိုပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီခရက်က 100 ရာခိုင်နှုန်းတော့ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ကြိုးစားပမ်းစားတော့ ခရက်ပေးထားပါတယ်။ BITTER WATER
naval arh သမားတွေအတွက် သင်္ဘောတစ်စင်းကို ရေထဲမောင်းကြည့်သည့်အခါ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရှင်းရန်မှာ တစ်ကယ်မလွယ်ကူလှပါ။ hydrodynamic and wave form တွေကို တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ CFD ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်လည်း တော်တော်ရှိပါတယ်။
ရားဖြည်ရန် MEF ပါ။ software စကားဝှက်က အပေါ်က စာလုံးအစောင်းနဲ့ရေးထားပါတယ်။
SFkrk_by_BiTT3r_W@t3r.part02.rar (1.00 MB, 62 views)
SFkrk_by_BiTT3r_W@t3r.part01.rar (1.00 MB, 58 views)
SFkrk_by_BiTT3r_W@t3r.part03.rar (592.7 KB, 53 views)
Reply With Quote The Following 8 Users Say Thank You to yeakharr For This Useful Post:
chit tee, dolphinlay, Hay Stack, Ko-Naing, kothat, NayYanNaing, ကိုထွန်း, အေး 06-12-2012 11:28 AM
Rep Power0Hi Yeakharr,
rar password is not working. Please help.
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to donaldk For This Useful Post:
pazflor, tunaungkyaw, ကိုထွန်း 06-12-2012 12:17 PM
Rep Power9Originally Posted by donaldk
I have checked just now. The password is correct. အမ်အီးအက်ဖ် (အကြီးစာလုံး ၃လုံးပါ)
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to tunaungkyaw For This Useful Post:
AKSoe, pazflor, ကိုထွန်း 06-18-2012 08:32 AM
Rep Power0Thanksalot. It works.
Reply With Quote The Following User Says Thank You to donaldk For This Useful Post:
pazflor 06-19-2012 03:10 AM
Posts 65	Thanks 379
Rep Power0ဒါနဲ့ အကိုတို့ဆီမှာ ဆောဖ်ဝဲ အပြည့်အစုံရှိလားခင်ဗျာ၊ စမ်းကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
Rep Power 10 Originally Posted by pazflor
ဒါနဲ့ အကိုတို့ဆီမှာ ဆောဖျဝဲ အပွညျ့အစုံရှိလားခငျဗြာ၊ စမျးကွညျ့ခငျြပါသေးတယျ။
ပထမပိုစ်မှာ attachment ပါတယ်လေ...
Reply With Quote The Following User Says Thank You to yeakharr For This Useful Post:
pazflor 11-18-2013 12:47 PM
Rep Power0ဒီ Software ကိုမြန်မာမှာ ရနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ သုံးချင်လို.ပါ
Hi all Reply With Quote 12-01-2013 07:19 PM
Rep Power 10့်မြန်မာပြည်မှာ ဝယ်လို့ မရနိုင်ပါ။ ကျနော်ဆီမှာ ရှိတဲံ ဗားရှင်းကလည်း ဖိုင်ကြီးတော့ ဒီက တင်ပေးလို့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
AKSoe, phoelapyae, William Paul 12-03-2013 12:45 PM
Rep Power0ဟုတ်ကဲ့အကိုရေခါး ... ကျနော်က..ရေကြောင်း final (Naval Architecture & Ocean Engineering) ကပါ... ကျနော်တို.မှာလည်း Software တွေကိုလေ့လာနေရတော့ ... အကိုနဲ.ဆက်သွယ်လုိ. ရခဲ့ရင်... ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အကို
Hi all Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to AKSoe For This Useful Post:
chit tee, William Paul + Reply to Thread